प्रमाण को Admissibility र सान्दर्भिकता कानूनी कार्यवाही को अवस्थित पक्षबाट आफ्नै विशेषताहरु छन्। यो कानुनी नियम, साथै कानून को अभ्यास संग फरक दुवै कारण छ।
प्रमाण र सान्दर्भिकता को admissibility दुई तत्व हो:
यसको उत्पादन को legitimacy सबै निर्धारित प्रक्रिया को उत्सव संग;
एक विशेष मामला मा महत्व, अदालत वा प्रमाण व्यक्तिगत मामला अप्रासंगिक विचार हुन सक्छ।
के उदाहरणहरू दिन सकिन्छ?
उदाहरणका लागि, एक अदालतले निर्णय बिना खोज समयमा प्राप्त प्रमाण, यो मामला मा असाधारण परिस्थितिमा उपलब्ध थिए। उहाँले खातामा लिएनन्।
परिस्थिति पुष्टि को सान्दर्भिकता लागि जाँदा प्रक्रिया को सहभागीहरू द्वारा मा भरोसा। एक आपराधिक मामला प्रमाण मा कला अन्तर्गत परिस्थिति को मानक सूची समर्थन गर्दछ। 73 सीपीसी। उदाहरणका लागि, साक्षी बयान र निर्दोष साबित।
Admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता नागरिक कार्यवाही एउटा महत्त्वपूर्ण सुविधा छन्। formalization को एक उच्च डिग्री को जमघट र मूल्यांकन प्रक्रिया।
उदाहरणका लागि, एक व्यक्ति को पुष्टि मात्र चुकी प्रक्रिया फलस्वरूप जारी अशक्तता सन्दर्भ ITU हुन सक्छ।
प्रदान गवाही जहाँ दस्तावेज विवरण पुष्टि गर्न कुनै तरिका छैन। कुनै समर्थन कागजात हो भने, आफ्नो प्रतिस्थापन गवाही अनुमति छैन। नागरिक कार्यवाही मा Admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता अदालत द्वारा निर्धारित छन्।
यसलाई परिभाषित: के तथ्य, यो स्वीकार्य छ कि पुष्टि गर्ने, र त्यो - छैन। पनि अवस्थामा एउटै वर्गमा परिस्थिति र तथ्य को सूची साबित हुनुपर्छ भनेर भित्र, फरक छ।
मा Admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता को मध्यस्थता प्रक्रिया लगभग एउटै विशेषता द्वारा छन्, तर तिनीहरूले आफ्नै विशेषताहरु छन्। अदालतहरुमा विकास अभ्यासहरू - केही प्रक्रियागत नियम, अरूलाई कारण छन्।
उदाहरणका लागि, यो मा मामला फाइल देखि कागजातहरू संलग्न गर्न, अदालत सोध्न स्वीकार्य छ नागरिक कार्यवाही छ अनिश्चित।
एकै समयमा प्रमाण रूपमा जूरीको फैसला पक्कै एक विशेष व्यक्ति अपराध मात्र वास्तवमा पुष्टि गर्छ। जानकारीको लागि, मध्यस्थता, नागरिक र प्रशासनिक अवस्थामा, को निर्णयमा यसो सत्यतथ्य मात्र खातामा लिन सकिन्छ, र यो सही, छैन अदालत को दायित्व हो। अपवाद - एउटै व्यक्ति उपस्थित वास्तवमा। अनिवार्य notarial प्रेरित, यदि तिनीहरू रद्द छैन।
Admissibility र कार्यवाही मा प्रमाण को सान्दर्भिकता र दल expressly केही बयान आफ्नो मतभेद घोषणा चाहिन्छ।
मुख्य कार्य - प्रमाणित गर्न सकिन्छ कि सबै जानकारी संकलन गर्न। Admissibility र प्रमाण सम्बन्धी सबै को पहिलो, नागरिक र संगठन को अधिकार को सान्दर्भिकता। विशेष मा, एक नम्बर पूरा गर्न अदालत को प्राधिकरण investigative कार्यहरू, कानुनी सहायता गर्न साथै पहुँच।
एक मानक सेट लागू:
विशेषज्ञहरु र विशेषज्ञहरूको राय;
कागजातहरू पक्षहरूबाट पेश र एक वकील, अन्वेषक, मुद्दा चलाउने व्यक्ति र अदालत अनुरोध गरियो।
प्रमाण को Admissibility र सान्दर्भिकता विशेष मा उजुरी र merits को परीक्षा समयमा, प्रक्रिया सबै stakeholders द्वारा चुनौती सकिन्छ, र एक पटक।
रक्षा गर्ने अधिकार प्रतिबन्ध छैन वा आपराधिक प्रक्रिया कोड मान्यता, अनुसन्धान शरीर को अन्य उल्लंघन प्रतिबद्ध वा अदालत कुनै पनि कागजात सामग्री संलग्न गर्ने अधिकार हुनेछ। उदाहरणका लागि, उहाँले खातामा फिक्री व्यक्ति को स्वास्थ्य बारे डाक्टर को निष्कर्ष लिन हकदार छ। तपाईं ITU को मद्दत बिना गर्न सक्नुहुन्छ।
किनभने यो सुविधा, नागरिक कार्यवाही मा admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता को अक्सर भ्रम आपराधिक पल्ट नेतृत्व।
प्रशासनिक सामाग्री को विचार
समीक्षा प्रणाली आपराधिक प्रक्रिया त्यसैगरि निर्माण गरिएको छ:
सत्यतथ्य प्रमाणित गर्न स्पष्ट सूची;
प्रमाण पनि आरोप लगाए अधिकार प्रदान गरिएको हुनुपर्छ;
को sued व्यक्तिले आफ्नो निर्दोष साबित गर्ने अधिकार, तर दायित्व छ।
अनिवार्य प्रमाण सूचीमा के समावेश छ?
यस दुर्घटनामा को तथ्यलाई;
अपराधियों व्यक्ति छन्;
mitigating र गम्भीर बनाउनु रूपमा परिस्थिति;
परिस्थिति जो मामला वा यसको समापन खोल्ने इन्कार लागि आधार हो;
क्षति को मौद्रिक कुनै वस्तुको मूल्य;
अख्तियार वा अदालत समझे यो आवश्यक छ कि अन्य अवस्थामा पत्ता लगाउन।
प्रशासनिक offenses को कोड मा Admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता को अभियोजन लागि जिम्मेवार को अधिकारीहरु को कार्यहरूको विशुद्धता एक आकलन मा निर्माण गरिन्छ।
केही प्रक्रियाहरु पूरा
पूर्ण र ठीक माथि कोरिएका कसरी पहिलो कुरा निर्धारण गर्न। दोस्रो - आफूलाई जोगाउन एक व्यक्ति द्वारा त्यहाँ संलग्न गरिएको छ कि छैन भनेर। उदाहरणका लागि, त्यहाँ केही आफु को लागि कुरा छैन व्याख्या गर्न वा कानुनी सहायता प्राप्त गर्ने अधिकार छ। व्यक्ति उचित चिन्ह गर्न रिपोर्ट बनाउन समावेश, वास्तवमा अधिकारीहरु सबै प्रयासमा नेगेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रोटोकल दिइएको यदि छैन वा टिप्पणी गर्न मौका दिन इन्कार गरे, तपाईंले तुरुन्तै मुद्दा चलाउने व्यक्ति कार्यालय गर्न उजुरी लेख्न गर्नुपर्छ।
कसले यसलाई साक्षी समावेश र पूरा अनुमति दृश्य को निरीक्षण यस्तो क्यामेरा रूपमा शूटिंग को माध्यम द्वारा। नागरिक पनि त अदालत फाइलमा थप्न पर्छ जो आफ्नै रेकर्ड, बनाउन सक्छ। कुनै पनि मामला मा, म एक चालक अनुमतिपत्र को deprivation विषयमा हाल अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले बताए रूपमा।
मामला को आधार अक्सर जाँच सामाग्री को Supervisory अधिकारीहरूले छन्। आचरणको नियम उल्लङ्घन - प्रशासनिक जिम्मेवारी को मामला मा उनलाई प्रयोग गर्न पर्याप्त कारण हो।
एक छुट्टै प्रक्रिया - परीक्षा
सबै रुचि, एक विशेषज्ञ चुनौती उहाँलाई रूपमा अर्को व्यक्तिको नियुक्तिका लागि अनुरोध गर्न, विशेषज्ञ गर्न प्रश्नहरू राख्न मौका दिइन्छ। यी नियमहरू पालन गर्न विफलता झूटा को परीक्षा को परिणाम को निराकरण लागि आधार दिन सक्छ।
तसर्थ, admissibility र प्रमाण को सान्दर्भिकता - मामला मा निर्णय असर गर्ने एक गम्भीर मुद्दा।
एक विदेशी लागि रूस निमन्त्रणा कसरी बनाउने? संघीय माइग्रेसन सेवा, दर्ता क्रम लागि आवश्यक कागजातहरू
एक चमकिलो जूता कसरी बनाउने? जहाँ प्रकाश तलवों संग जूता किन्न?
"Ospamoks": प्रयोगको लागि निर्देशन। "Ospamoks": बच्चाहरु मा प्रयोग
जन्म बारेमा धेरै बताउन सक्नुहुन्छ
सल्फर संग Brewer गरेको खमीर - आवेदन स्कोप
पीवीसी देखि प्लास्टिक Windows को लागि Sills
मकै - एक तरकारी वा अनाज छ? प्रजातिहरू र मकै को संकर